Akany fitaizana ireo zaza mania – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 27, 2012 juin 27, 2012 Laisser un commentaire sur Akany fitaizana ireo zaza mania
Amin’ny anaran’i Jesosy Kristy irery ihany no hahafahana mandresy ny asan’ny devoly
Hoan’ny Akany Avoko Faravohitra ny volana May sy Aprily dia mitohy tsy tapaka ny fandefasana “film” arahina fifanan-kalozan-kevitra. Tsapafa mahomby tokoa ny fampitana ny hafatry ny Soratra Masina amin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika amin’ireo ankizy madinika sy tanora.Tamin’ity volana ity dia horonantsary “Jesosy” (tantaram-piainan’I Jesosy) no nalefa.
Satria moa amin’izao fotoana izao dia saika heno hatraiza hatraiza ny mikasika ny “club “satanique” ary ireo tanora no tena voakasik’izany. “Club satanique” izay manangoly ireo tanora amin’ny harena be ho azon’izy ireo raha manaiky hiditra ho mpikambana ao aminy. Ny horonan-tsarimihetsika “ Jesoa” dia manambara a azy ireo fa amin’i Jesosy dia tsy ny haren’ny tany no zava-dehibe ary na dia zanak’Andriamanitra aza dia nalain’ny devoly fanahy koa . Araka ny tantaram-piainany dia notezaina tamin’ny fahoriana, faharetana ary fanantenana izy mba hananany ny fiainana mandrakizay. Koa raha mandray an’I Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ihany no ho “Tena mpandresy eo amin’ny fiainana”.
Endrey ny hakanton’ny zavaboaarin’Andriamanitra
Na dia niato aza ny fiaraha-miasa tamin’ny Ankany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry nohon’ny antony manokana dia misaotra an’Andriamanitra fa mitohy ny fiaraha-miasa amin’izao fotoana izao. Nanomboka ity volana May dia nitohy ny fiaraha-miasa. Koa ny Alatsinainy 16 Aprily izay fidiran’ny mpianatra taorian’ny fialan’tsasatry ny Paska dia nisy ny fandefansana horonantsari-mihetsika “Ny isan’andro iainantsika dia fanomezana”narahina fifanakalozan-kevitra. Talohan’ny nandefasana ny horonantsary dia nitondra ny Tenin’Andriamanitra araka Genesisy I ny Teolojiana vehivavy avy amin’ny Foibe Loterana Malagasy mikasika ny famoronana. Nifanojo tsara ny toriteny sy ny hafatry ny Soratra Masina avy amin’ny horonan-tsarimihetsika nalefa satria dia samy nanambara ny hankaton’ny zavaboaary ; voalohany amin’izany isika olombelona izay nohariany tahaka ny endriny. Koa ny fahavelomana dia fanomezana avy amin’Andriamanitra hanehoantsika ny maha “Asan’ny tanan’Andriamanitra antsika” izay tsy tokony ho esorintsika amintsika.
Hitombo amin’ny fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanitra
Hoan’ny Akany Avoko Ambohidratrimo kosa, ny Alarobia 9 May 2012 dia nanatanteraka horonan-tsarimihetsika narahina fifaninanan Soratra Masina. Ampahatsiahivina fa io Akany io dia mitaiza sy manabe tanora lahy sy vavy tratry ny tsindry hazo lena na herisetra (fanolanana, narian’ny ray aman-dreny, kamboty, …), mahatratra 100 mahery izy ireo. Ny fikendrena tamin’izao fifaninanana Soratra Masina izao moa dia ny hisarihana sy hampifantoka azy ireo amin’ny hafatra tian’ny Baiboly ambara amin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika ary koa ny hirosoan’izy ireo amin’ny « Cours Bibilque par Correspondance ». Tamin’ity fifaninana ity dia ireo tanora lahy sy vavy 13 taona miakatra no nampandray anjara ary nahatratra 43 izany. Ny horonan-tsarimihetsika “Ilay olon-tsy fantatra” no nalefa. Nikasika horonan-tsarimihetsika sy ny Paska ny fanontaniana. Ny Alarobia 13 jona no nizarana ny loka hoan’ireo 10 nahazo isa ambony indrindra.